Ego ole ka ntinye ederede? | Martech Zone
A juru m ajụjụ na-adọrọ mmasị taa ma achọrọ m ịkọrọ gị ya iji nweta echiche gị. Ọ nwere ụzọ dị mfe iji gwa ole blọgụ blọgụ mmadụ nwere?
na WordPress, ọ mara mma (ma eleghị anya kwa mfe). Ihichapụ ọ bụla post bụ div na Post ID. Ihe nzipu Post bu ihe dika ihe ederede. Daalụ onwe! :). O juru m anya na nke a abụghị obfuscated ntakịrị.
N'ezie, nke a anaghị echebara echiche posts ndị ịhichapụ, mana ọ bụ atụmatụ dị nso.
Na kwadoro ịde blọgụ ngwa, dị ka Blogger, Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ebe ọ bụ na e kenyere POSTID n'ofe blọọgụ niile:
Otu ihe dị mfe m na-eji bụ ime nchọta saịtị na Google. Nwere ike imebi afọ na ole ederede pụrụ iche na afọ:
Ana m agbaghara Paul Dunay (nnukwu Ahịa pọdkastị!) n'ọdịnihu. Enwere m ike ịkọwa site na nyocha, na-eji afọ, na Paul nwere posts 125. O nwere afọ 50 tupu mgbe ahụ na 32 ruo ugbu a na 2008. inddị nke sneaky, huh?
Any nwere ụzọ dị mfe ebe ị nwere ike ịgwa ọnụọgụ nke blọọgụ na ntanetị gafee nyiwe ndị ọzọ?
Tags: mkpachịpr nkesammekọrịtaEbumnuche Teknụzụwordpress esi
Barbara Ling kwuru
Mee 29, 2008 na 6: 54 AM
Nwere ike mgbe niile na-agba ọsọ a Lynx iwu site a iwu ngwá ọrụ n'ịwa niile njikọ hụrụ na mgbe ọkpọkọ ya thru wc -l.
Dị ka iji iji hama ịkwanye na mkpịsị aka. 🙂
Morningtụtụ m ọchị tupu m lakpuo na keyboard m, Barbara
Mee 29, 2008 na 7: 25 AM
Akwa post na ezigbo ajụjụ Doug
O di m ka nma karicha na blog m!
Daalụ maka ịkpọtụrụ
Mee 29, 2008 na 7: 29 AM
Achọrọ m ezigbo blogger dabeere na blog dị ka ihe atụ na nke gị bụ nke uche.
Ọ bụghị banyere ọtụtụ - ogo nke post gị na oge ị ga - edezi na biputere ha pụtara ìhè!
Mee 29, 2008 na 8: 09 AM
Ma obu - ma achoputara m na enweghi ezigbo uzo obula dika ochicho Google na iwu Lynx puru iche - inwere ike lelee ebe edebe ihe ochie nke na egosi otutu ihe edere maka onwa / afo obula, were pensụl na mpempe akwụkwọ jupụta ha. 😀
Mee 29, 2008 na 7: 52 PM
Tinye Douglas Karr: Cyber-alkbụ!
Naanị ihe edeturu, enwere ọtụtụ ihe MySQL nwere ike ịhapu onwe ya ka ọnụọgụ ọnụọgụ bụ ikike kachasị, ọ bụghị ọnụ ọgụgụ ziri ezi. Naanị FYI.
Mee 29, 2008 na 10: 11 PM
Ezigbo nwude Doug, achọpụtabeghị m na ị ga - achọpụta ụzọ a - ọ dịkwa mfe!
Ọ bụrụ na blọọgụ ahụ zoola njikọ na ebe nchekwa na m chọrọ ịnwale ma ọ bụrụ na ọ bụ blọọgụ ọhụụ ma ọ bụ na ọ bụghị (ma ọ bụ naanị blog spam nwere ihe ole na ole), ana m agbanye bọtịnụ RSS na ihe nchọgharị firefox m iji lelee ndepụta . Dị ka ndabere maka WordPress RSS posts bụ 10 (na mgbe ahapụ emetụbeghị), ọ bụla obere posts karịa nke a na ndepụta ahụ na-agwakarị m na nke a bụ blog ọhụrụ (na ọtụtụ blọọgụ spam ka nwere 'hello ụwa' ebe ahụ dị ka nke mbụ post).
Kpamkpam untech m maara. Echiche ndị dị n'elu bara uru karị!